EyeThupha 24, 2018 admin
amaqela Bittrex yokuthengisa ngokuqinileyo yokusungula crypto iqonga izibambiso zorhwebo
US based cryptocurrency exchange Bittrex ibambisene a “inkqubo nezilawulwa urhwebo enye” ngenjongo yokuba ekugqibeleni kuqaliswa crypto-izibambiso zorhwebo. Bitrex uthe isebenza ne Rialto Trading, leyo okwangoku inikela iimveliso fixed-ingeniso ukuba abathengisi, ukuze bafumane imvume yokulawulwa ukuxhasa “izibambiso blockchain-based.”
Ukuba kunikwe imvume, Rialto zokusungula indawo “esibanzi” izibambiso umnikelo, kubandakanya ngenkonzo yengcebiso kunikezelo, nokubekwa, inkonzo lokukhulisa, & urhwebo USD. CEO Trading beqinile Rialto kaThixo linguShari Noonan uthe “Ngokusebenza kunye, siza kukwazi ukwandisa ngamadini ethu ngoku umxhasi ibandakanye kuphela izibambiso digital, kodwa linike ukufikelela iqonga yorhwebo phambili kwihlabathi jikelele kwaye athembekile.”
inkampani isikhwama Bitcoin ufumana mvume E-mali evela UK Regulator
Wirex, a Bitcoin isipaji kunye lekhadi umboneleli London-based, uthi kuye inkampani ye crypto-enabled 3 ukufumana-mvume E-mali evela nabalawuli zemali UK(Financial Conduct Authority.) Le mvume yenza ukuba inkampani ukuba akhuphe imali elektronikhi nokubonelela ngeenkonzo intlawulo kulo lonke European Union kunye noMbutho woRhwebo olukhululekileyo lwaseYurophu, ngezizukulwane zoluntu.
pavel Matveev, i co-umsunguli Wirex, wathi ukukhululwa ukuba ukuba sizama “ukuphucula nokucokisa iinkonzo zayo e-mali kulo [European Economic Area].””Ukuba iphepha-mvume yethu eyinhloko, endaweni mvume yethu arhente Inombolo ezikhoyo, kuthetha ukusebenza okwandayo kunye neendleko eziphantsi.” ngaphezu, ngokutsho Kelly Horn, ummeli abezindaba Wirex, le mvume iza kunika Wirex ukukwazi ukunika ngokukhawuleza kunye nenkonzo ephendulayo ngakumbi ehlise kubaxumi bayo. Matveev wongezelela ukuba inkampani iye mvume kwezinye iimarike ekufuneni, kuquka e Singapore kunye Japan, njengoko besebenza ukwandisa ishishini layo ngamazwe.
Singapore Stock Exchange isebenzisa blockchain for zokuhlala ngokukhawuleza
exchange stock Singapore xa usebenza Monetary Authority of Singapore (KODWA), de facto bank umzi-sikarhulumente central, ukusebenzisa blockchain ngenjongo yokuphucula ukusebenza izibambiso zokuhlala. the Singapore Exchange (SGX) Wathi ukusebenzisana ijolise izinga Delivery yelizwe ithelekiswa Payment (DvP) amandla ukuze kube nako imishini transactions nge izivumelwano smart blockchain-based. DvP yinkqubo ityala iqinisekisa ukuba asethi kwenziwa kuphela xa iintlawulo esihambelanayo kusamkelwa.
Zizinike inkxaso zeteknoloji luluhlu lwe mveliso ezaziwayo-kakuhle ezifana NASDAQ kunye neenkonzo zobungcali siqinile Deloitte, kwakunye blockchain kuqaliso Anquan, ngokutsho isaziso. Injongo kukuphuhlisa womnatha asasazwa apho amaziko ezemali kunye nabatyali nga transact lwamaphepha aguqulwe imiqondiso yedijithali ngenxa yokuba kukho amaqonga blockchain ezahlukeneyo.
Ngoku Mt Gox Bitcoin abatyalwayo bangafaka amabango kwisimo
Abatyalwayo ze exchange bitcoin elide-nongasebenziyo Mat Gox ngoku ukuqala angenise ubungqina zamabango abo kwinkqubo yesiqhelo eziphunyezwe ezintsha. Nobuaki Kobayashi, njengabathenjwa Mt. Gox, labhengeza kunothi ngoLwesine ukuba inkqubo yebango yokufayilisha ngekhompyutha ngoku phezulu kwaye isebenze amatyala, nokuba ngaba baza bafaka ngeziganeko kumabango kwi ungonakala kokuqhubeka yangaphambili.
Kobayashi wathi abatyalwayo de Okt. 22nd ukuze ufake ubungqina & wathi “Umhla ocetywayo ukuba kwimo weTrasti ukuba lingenise uxhwebhu ukuvunywa okanye ukwaliwa kwi inkundla ngoJanuwari 24, 2019, kodwa, kwindawo yangoku ngexesha, umhla article zange igqitywe.” kunjalo, abasebenzisi abaphulukana ukufikelela elithile online ku Mt. Gox kungenzeka ukuba angenise ulwazi indlela intanethi ngokuthumela, ngeziganeko kwidilesi eTokyo otyunjwe Mt. Gox trustee.
Umzuzwana ithi “ukubuyekeza” rejections ETF Bitcoin
i isekhondi wathi amagosa ayo aphezulu uya kuthi asiqwalasele esi odolo akahambisani for 9 ETFs Bitcoin ekhutshwe ngoLwesithathu. Njengoko unobhala Sec Brent Fields wabhala ileta ebhalelwe NYSE Group isiluleko senior uDavide De Gregorio: ” IKomishoni iza kuhlola intshukumo amagunya. i August 22 Ukuze ke wahlala de-odolo Commission ngenye indlela.”
UHester Peirce wavakalisa iindaba, ngubani okuqaphelekayo dissented ukusuka kwiinyanga yokugqibela Bitcoin isigqibo ETF sokwala. Xa Follow-up, Commissioner Peirce wachaza amanyathelo ukuba beze njengoko umzuzwana uthuthela ngokutsha izigqibo. “IKhomishini (USihlalo kunye nooSomakhonkco) abathunywa eminye imisebenzi ukuba abasebenzi balo. Xa abasebenzi isebenza kwiimeko ezinjalo, esisebenza phezu Egameni Lekomishoni. IKhomishoni angasiqwalasela intshukumo kwabasebenzi, njengokuba ngoku kuza kwenzeka apha.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 23.08.2018